BNGRC: Tandidomin-doza ny tendrombohitr’ i Manjakamiadana sy Ambatomaro.
CNTMAD: Nanitatra ny foto-drafitra asa.
FITIA Boutique : Fikojakojana ny endrika amam-bika, sahaza ho an’ny rehetra.
Grande Braderie de Madagascar: Mihena 15% ny vidin’ny fitaovan’ny mpianatra.
Hotontosaina manomboka amin’ny alarobia 30 Septambra ho avy izao ary tsy hifarana raha tsy amin’ny alahady 04 Oktobra ao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy Fanatanjahantena Mahamasina ny Grande Braderie de Madagascar karakarain’ny Mada Vision. Ny fitaovan’ny mpianatra no tena hibahana amin’ ity andiany ity satria trano heva 150 eo no hivarotra fitaovana momban’ny mpianatra fotsiny. Ny(…)